I-Silicon Carbide Mechanical End-Face Ceramic Seals China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > I-Silicon Carbide Mechanical End-Face Ceramic Seals
Izitifiketi ze-ceramic zokuphela komzimba ziwuhlobo lwesitoreji esisetshenziselwa imishini eguquguqukayo, njengabaxube, amaphampu, ama-blower, i-compressor. Lapho uhlelo lwepompo lusebenza, uketshezi lwaluthola ukuphuma kwepompo phakathi kwe-shaft ejikelezayo kanye ne-stator. Kunzima ukuvimbela ukuqhuma kwenzeka. Khona-ke izigxobo ze-ceramic zokuphela ze-mechanic zidlala indima ebalulekile ekuvimbeleni ukuvuza.
Sinesipiliyoni esingaphezu kuka-13 se-OEM, i-ODM yokukhiqiza, singasiza amakhasimende ukuklama ubuso obunamathele be-SiC ceramic ebusweni noma ukuhlinzeka ngemibono ethile yezobuchwepheshe.
Amanzi / Amafutha / i-Gas, i-gasification gasification, amakhemikhali kanye ne-petrochemical, ukuhlanzwa kabusha, amandla, i-pulp nephepha, amanzi, amachiza, amayeza
Imikhiqizo yekhwalithi iphuma ebucikweni bombuso wezinqubo zokukhiqiza, futhi idinga ithuluzi lokuhlola eliphambili. Imishini yokuhlola eyinhloko ihlanganisa i-CMM, iphrojekitha, njll .
I-disc ephezulu yokugqoka i-ceramic friction disc
I-Alumina ye-eyelet eyelet guide
I-alumina ephezulu ye-alumina bobbin
Izindwangu zokuphela kwe-Mechanical End-Face
Izindwangu ze-Ceramic End-Face Mechanical
Isimpawu sokugcina se-End-Face Mechanical
Izindandatho zokufaka uphawu lwe-Ceramic
Izingxenye zokufaka uphawu lwe-Ceramic